Mucaaradka oo ku dhawaaqaya dhismaha dowlad cusub | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharixiinta Mucaaradka oo maalmihii la soo dhaafay shirar aan kala joogi lahayn uga socdeen Muqdisho, ayaa ugu danbeyn la filayaa in ay ku dhawaaqaan go’aankooda ka dhanka ah arrimaha doorashadda iyo boobka socda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xogo muhiim ah iyo ilo aad ugu dhow, Midowga Musharixiinta, ayaa sheegaya in inta badan xubnaha Golaha ay isku raaceen in sida ugu dhaqsiyaha badan dhidibada loogu taago Gole Qaran oo ku meel gaar ah, kaas oo dalka ka saara xilliga kala guurka.
Sida ay xoguhu caddeynayaan, doodda mucaaradka ee kulamadii maalmahaan uga socday Muqdisho, ayaa ka gudbay wajiga koobaad, waxaana diiradda la saarayaa in muddo labo sano gudaheed ah, dalka looga qabto doorasho la isla-oggol yahay oo MM masuul ka yihiin.
“Golaha cusub, kuma koobnaan doono kaliya Musharixiinta, aragtida iyaga ayaa leh, laakiin, Ururrada bulshada, qaar ka mid ah dowlad gobolleedyada iyo siyaasiinta kale, ayaa xubno ka noqon doona, fulintuna waxa aynoqon doonaan tiro is-dheer oo lagu heshiiyay”. Ayuu yiri shaqsiga xoqtaan nala wadaagay.
Dhanka kale, mucaaradku waxa ay caasimadda maalmihii la soo dhaafay ka wadeen, kulamo ay la yeellayaan saraakiisha ciidanka, aan shaqeyn, kuwaas oo sida xoguhu tilmaamayaan loo xil-saaray in ay dib u abaabulaan ciidankii Badbaado Qaran, ee bishii April ka hor tagay muddo kordhintii Farmaajo.
Doorashooyinka ayaa dib uga dhacay xilligii loo qorsheeyay, muddo hal sano ah, halka Golaha Wadatashiga Qaran ee RW Rooble, hoggaamiyo ku fashilmeen hirgalinta hannaan doorasho oo xalaal ah.
Muddo xileedkii sharciga ahaa ee Farmaajo ayaa dhamaaday ku dhawaad 300 oo maalmood ka hor, wuxuuna wali ku jiraa xaafiiska Madaxweynaha, isagoo ka shaqeynaya boobka kuraasta, si uu dib ugu soo laabto.
Qoorqoor iyo Lafta-gareen, ayaa Farmaajo u boobay inta badan kuraasta Golaha Shacabka ee ilaa hadda la doortay, halka Madoobe iyo Deni, la soo warinaayo in ay sugayaan go’aanka Mucaaradka ee dhisidda Golaha Cusub, kaas oo la filayo in ay taageeraan.
Wakiillada beesha caalamka, ayaa hore u sheegay u aan la taageeri doonin geeddi-socod doorasho oo is barbar socda, dib-u-dhac hor leh iyo muddo kororsi waqtiga lagu sii dheereeyo, hayeeshee, mucaaradka ayaa markaan u muuqda in ay BC dhagaha ka fureysan doonaan sida Farmaajo.